Copac Inoti Vatori veNhau Vari Kuburitsa Manyepo
Kukadzi 09, 2012
Komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remutemo yeCopac inoti zviri kunyorwa mumapepanhau zvekuti bumbiro idzva richarambidza vanhu vane makore anodarika makumi manomwe kana vakambotungamira nyika kaviri kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiriri wenyika ndezvemanyepo, sezvo komiti iyi isati yapedza kuunganidza zvakabva muvanhu.
Mumwe wemasachigaro matatu ekomiti iyi, VaEdward Mkhosi, veMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo komiti yavo isati yazeya nyaya iyi inozotambirwa chete kana ivo semasachigaro vabvumirana nezviri mugwaro iri.
VaMkhosi vanoti vatori venhau vanofanira kusiyana nekunyora manyepo uye vanofanirwa kunyora zvavanopihwa nemasachigaro ekomiti iyi chete.
Mumwe wemasachigaro aya, VaDouglas Mwonzora veMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, vanoti vaita musangano nevatori venhau kuitira kuti vajekese nezvenyaya iyi.
Vatiwo komiti yavo ichaonawo kuti pfungwa dzevanhu pamusoro penyaya iyi dzaremekedzwa.
Svondo rapfuura nerino, mapepanhau munyika ange ari kunyora kuti bumbiro idzva richarambidza harahwa dzine makore anodarika makumi manonwe pamwe neavo vakambotungamira nyika kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika, izvo zvinozoita kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vasakwikwidze musarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa nguva ipi zvayo kubva pari zvino.
Asi bato ravo reZanu PF rinoti VaMugabe ndivo varinoda kuti vari miririre bato musarudzo idzi.
Mumwe wemasachigaro ekomiti iyi, VaPaul Mangwana veZanu PF, vanoti kana zvikafamba samarongero avo, komiti yavo ichapedza kunyora bumbiro kupera kwemwedzi uno.
Vati mushure maizvozvo, bumbiro idzva iri richashambadzwa referendamu isati yaitwa.
Referendamu iyi inenge yava referendamu yechipiri kuitwa munyika, zvichitevera referendamu yakaitwa muna 2000, iyo yakaramba kutambira bumbiro rakanga ranyorwa mushure mekunge vanhu vakurudzirwa kuita izvi nesangano reNational Constitutional Assemby.
Sangano iri riri kukurudzira zvakare rwendo rwuno kuti veruzhinji vasatambire Draft Constitution pareferendamu richiti zvido zvevanhu hazvisi kuremekedzwa nemapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende yemubatanidzwa.
Vatungamiri vemapato ari muhurumende vakazivisawo neChitatu kuti vachange vave nechekuita nekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, kuitira kuti rikasike kupera.
Vachitaura kuvatori venhau, mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vakati pari zvino vamirira gwaro rinobva kuCopac richivazivisa kuti hurongwa uhu hwasvika papi.
Vari kunyora bumbiro remitemo iri vanonzi vakapedza mipanda gumi nemisere kubva pamipanda mugumi nepfumbamwe.